Tusaha Bixiyaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > Tusaha Bixiyaha
U adeegso tusaha si aad u hesho bixiyeyaasha, isbitaalada iyo farmashiyaha kuugu dhow.
Raadi Bixiyeyaasha Agtaada ah
Tusayaasha adeeg bixiyayaasha waxaa loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad hesho bixiyeyaasha shabakadda iyo tas-hiilaadka adeegga, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta daryeelka aasaasiga ah, takhasusleyaal, rugaha caafimaadka, isbitaallada, farmashiyeyaasha, bixiyeyaasha aragga iyo khabiirada caafimaadka dhimirka ee Bariga iyo Galbeedka Washington.
Isticmaal our qalabka raadinta si aad u daalacato tusayaasha, ama aad kala soo degto tusayaasha.
Tilmaamaha Bixiyaha iyo Xarunta 2022
Buugga Daryeelka Aasaasiga ah
Tusaha Khabiirada, Galbeedka Washington
Tusaha Khabiirada, Bariga Washington
Tusaha Farmashiyaha - Qorshaha Labada
Tusaha Farmashiyaha - Qorshayaasha 1, 2, 3, 4
Tusaha Shabakadda Aragtida
🡻 Guji si aad u ballaariso tusayaasha 2021
Eeg Tusaha 2021
Buugga Farmashiyaha (MA Laba Qorshe)
Daryeelka Asaasiga ah
Xubin ahaan CHPW, waa inaad doorataa Bixiyaha Daryeelka Koowaad (PCP) ee shabakadda dhexdeeda oo aad isticmaashaa PCP-gaaga shabakadda si aad u hesho daryeelkaaga caafimaad. Waxa kaliya ee ka reeban waa xaaladaha degdegga ah, daryeel degdeg ah oo loo baahan yahay marka shabakaddu aysan jirin (guud ahaan, marka aad ka maqantahay aagga adeegga), adeegyada ka-sifeynta ee aagga ka baxsan, iyo kiisaska uu CHPW oggolaaday adeegsiga bixiyeyaasha ka baxsan shabakadda .
Waxaan qandaraas kula jirnaa Qorshaha Adeegyada Aragga, ama VSP, si aan kuu siino adeegyada aragga. Shabakadda Xulashada VSP waxay bixisaa liiska bixiyeyaasha qandaraaska haysta.
Laga yaabaa in aad u tag mid kasta oo ka mid ah bixiyeyaasha shabakadeena ee ku qoran Tusaha Shabakadda Aragga kor Intaad xubin ka tahay Qorshaheenna, waa inaad isticmaashaa bixiyeyaasha shabakadda si aad u hesho adeegyadaada caymiska marka laga reebo xaalado xaddidan sida xaaladaha degdegga ah ama daryeelka degdegga ah ee aagga ka baxsan. Marka laga reebo xaaladaha degdegga ah ama daryeelka degdegga ah, waxaa laga yaabaa inay kharash badan ku kacdo daryeel ka helidda bixiyeyaasha shabakadda ka baxsan.
Isbeddellada tusayaasha ayaa dhici kara
Farmashiyaha iyo bixiyaha shabakadaha ayaa isbeddeli kara wakhti kasta. Waxaad heli doontaa ogeysiis marka loo baahdo.